Amazonium ⋆ Aquarium-လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းများ! ငါးမွေးကန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်!
Multi-ကို LANGUAGE AQUARIUM ဘလော့ခ်ဘလော့ခ်ဘာသာစကားမျိုးစုံငါးမွေးကန်多語言水族館博客 DAUDZVALODU AKVĀRIJA blog MNOGOMOVNY AKVARІYဘလော့ခ် MEHRSPRACHIGER AQUARIUM-ဘလော့ခ်ဘလော့ခ် AQUARIUM ဘာသာပေါင်းစုံ多言語水族館ブログဘလော့ခ် MNOGOMOVNYH Aquarena
အဆိုပါငါးမွေးကန်များတွင်ရေညှိ! ဘယ်လိုအနိုင်ရ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတှေ့အကွုံ!
အဆိုပါငါးမွေးကန်များတွင်ရေညှိ။ ၏အကြောင်းတရားများ။ တချို့ကအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ကျနော်တို့ပေါ်မှာငါတို့ငါးမွေးကန်များတွင်အလင်းရောင်ပြောင်းလဲသွားတယ် LED Aquael retro မထိုက်မတန်။ ငါးမွေးကန်အလင်းရောင် LED ။ T5 နှင့်အတူရှေ့ဆက်ပြီးအိပ်မက်ဆိုးအဖြစ်ကိုမေ့လျော့။ Read more ... ထိုအခါငါဖိုရမ်များနှင့်အုပ်စုများတွေအများကြီးကိုဖတ်သည်အထိအရာအားလုံး, ဒဏ်ငွေခဲ့သည် Facebookထိုနောက်မှငါသည်အလင်းရောင်ဆုံးဖြတ် ...
ငါမကြာသေးမီကမှပြောသော C02 ပျံ့ akvariume.Sovsem amazoniumစနစ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် install လုပ်ထားပေးသော .net, "CO2 နှစ်ခုပလပ်စတစ်ပုလင်းထဲကနေစုဝေးသောအကြံပေးအဖွဲ့အတွက်မီးစက် ", citric အက်ဆစ်နှင့်ဆိုဒါသုံးပြီးလည်ပတ်ခြင်း, မှာဝယ်ခဲ့သည် Aliexpress. CO2 ငါးမွေးကန်အတွက်မီးစက်။ running ။ အဲဒါကိုတစ်ထို့အပြင်အမျှငါပျံ့ dokupal ... Read more ...
CO2 ငါးမွေးကန်အတွက်မီးစက်။ running ။
CO2 ငါးမွေးကန်အတွက်မီးစက်။ နိဒါနျးပိုငျး။ ငါငါးပြတိုက်စတင်သောအခါ, အပင်အစဉ်အမြဲငါ့အဘို့ငါးပြီးနောက်ဒုတိယနေရာဖြစ်ရပြီ။ ပြီးတော့ငါကသင်၏အသက်တာကိုပေးဝေရေးစနစ်တပ်ဆင်ရှုပ်ထွေးသွားဘူးထင် CO2 အဆိုပါငါးမွေးကန်။ ပိုနေတဲ့ပူဖောင်းကုန်ကျစရိတ်သုံးပြီးအဆင်သင့်လုပ်ဖြေရှင်းချက်အတော်လေးစျေးကြီးကြောင်း။ ထိုအသုံးပြီး ...
ကင်ဆာထောင်ပြီးမက္ကဆီကန်! ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာ Love!
ကင်ဆာထောင်ပြီး meksikanskiy.Za ငါးပြတိုက်စျခြိနျလုံးအလုပ်များ, ငါနားလည်ရန်နှင့်ပုံမှန်အတိုင်းပုစွန်ကိုချစ်နိုင်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ (သာမန်စကားလုံးငါခါတိုင်းလိုပုစွန်, အသေးစားအရွယ်အစားမဟုတ်ဘဲစျေးနှုန်းဖောက်သို့မဟုတ်အရောင်ကိုဆိုလိုတာ) သကြိမ်အတူငါဘာကြောင့်လဲသိထင်ပါတယ်။ ငါ့အဘို့လည်းသေးငယ်အားလုံးပုစွန်၏ပထမ။ နှင့်ဒုတိယအစောင့်ကြည့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သူတို့ကအတော်လေးရှိပါတယ် ...
ထောင်ပြီးဖား (Hymenochirus boettgeri) - ကင်ဆာအပေါ်တိုက်ခိုက်!
ထောင်ပြီးဖား (Hymenochirus boettgeri) ။ အထွေထွေအချက်အလက်! တိကျစွာအဓိကဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအကျဉ်းဖော်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို၏ရုပ်ပုံကိုတင်ပြနိုင်ရန်အတွက်။ ထောင်ပြီးဖား (Hymenochirus boettgeri) - Gimenohirus Böttger၎င်း၏ဟာသအပြုအမူများအတွက်လူသိများငြိမ်းချမ်းသောအလွန်သေးငယ်သောဖား,! (ထိုဖိုရမ်များ၏တဦးတည်းတွင်, တစ်စုံတစ်ဦးက "ယောဂီရေငုပ်သူ။ " ဖားကိုခေါ်အခုတော့သောနာမကိုအမှီ 100% နှင့်အတူဘား၏အပြုအမူကိုဖော်ပြထားတယ်ရဲ့ ...
အသစ်ကဗီဒီယိုတွေကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့! ချန်နယ် Subscribe!
ဆိုက်ငှါ, ဟိုက်ပါလင့်ခ်တစ်ခုခုကိုပစ္စည်းများအသုံးပြုတဲ့အခါ amazoniumတာဝန် .net
အားလုံးအခွင့်အရေးများ© 2019 reserved amazonium.net
© 2019 Amazonium - WordPress ကိုအဓိကအကြောင်းအရာအားဖြင့် Kadence Themes
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုမှုများအတွက် cookies များကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျထို site ကိုသုံးပါမှဆက်လက်ပါလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြောင်းယူဆပါလိမ့်မယ်။Ok